आलेख : असिनाले टिम्मुर सखाप ! -
आलेख : असिनाले टिम्मुर सखाप !
१५ कार्तिक २०७६, शुक्रबार १४:५८ । गलेश्वर
आधा दशक अगाडिसम्म कौडीको मूल्यमा बिक्री हुने टिम्मुरको स्वदेश तथा विदेशबाट अत्यधिक माग हुन थालेपछि तोरीपानीका कृषक टिम्मुर खेतीतर्फ आकर्षित भएका थिए । प्रतिपाथी १ हजार ८ सयदेखि २ हजार ३०० रुपैयाँ सम्ममा बिक्री हुने टिम्मुरबाट गाउँमा वार्षिक ५० लाख भन्दा बढी रकम भित्रिने गरेकामा यस वर्ष भने यहाँका किसानले टिम्मुर बिक्रीबाट हुने आम्दानी गुमाए ।
खेतबारी, सामुदायिक वनमा फलेको टिम्मुरलाई घरायसी प्रयोजनमा ल्याउने र थोरै मात्रामा सदरमुकाम बेनी लगेर बेच्ने किसानहरु अहिले यसैबाट मनग्य कमाउँछन् । अध्यक्ष बानियाँका अनुसार दुई–चार जनाबाट शुरू गरिएको टिम्मुर खेतीमा अहिले गाउँका १५० घरधुरी सक्रिय रहेका छन् । उनले भने– ‘बिक्रीका लागि कुनै समस्या छैन । ग्राहकहरु टिम्मुर खोज्दै घरदैलोमै आउँछन् । विदेशबाट समेत माग आउन थालेपछि प्रमुख आम्दानीको स्रोत बनाएका छौं ।’
दलित र एकल महिलालाई सामुदायिक वनमा फलेका टिम्मुर टिप्न र बेच्न छुट दिइएको छ । बानियाँ द्वयको नर्सरीबाट वार्षिक ५ हजारको हाराहारीमा गाउँमा बिरूवा बिक्री हुन्छ ।
वन डिभिजन कार्यालय, म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायतका सङ्घसंस्थाको पहलमा सञ्चालित तालीममा उनीहरु सहभागी हुनुभएको थियो । यहाँको नर्सरीमा हुर्काइएको एक बिरूवालाई २५ रुपैयाँ पर्छ ।
‘बिरुवा खरिद गर्न नर्सरीमै आउँछन्, टिम्मुरलाई सुनको अण्डा जस्तै मानेर फलाइरहेका थियौं, यस वर्ष असिनाले सखाप पारिदियो’, गुमानसिंहले भने । उनका अनुसार टिम्मुरको एउटै बोटमा १८ किलोसम्म फलाएर ३० हजार रुपैयाँसम्म कमाउने किसानहरु छन् ।
जिल्लाभर वार्षिक करीव ३ हजार केजी टिम्मुर उत्पादनको सम्भावना रहेको सापकोटाको अनुमान छ ।
म्याग्दीको तोरीपानी भनेपछि देशैभरि टिम्मुर र टिम्मुरका बिरुवा पाइने ठाउँ भनेर चिनिन्थ्यो । यहाँबाट देशका विभिन्न जिल्लामा टिम्मुरका बिरुवा निर्यात हुने गरेको थियो ।
अन्नबाली भन्दा दश गुणा बढी आम्दानी हुने भए पनि बेनी नगरपालिका–२ गौश्वराका एक कृषकले टिम्मुरको बोट काटेर खेतबारीमा पशुचौपायालाई प्रवेश गर्न रोक्ने बार लगाएका छन् । गौश्वराको खेतबारी र वनजङ्गलमा फलेको टिम्मुरले अहिलेसम्म बजार पाएको छैन । टिम्मुर खेतीमा प्रचूर सम्भावना रहेको क्षेत्र भए पनि वर्षेनी फल्ने टिम्मुर घरायसी उपयोगमा बाहेक बजार पु¥याउन सकिएको छैन । खेतबारी, जङ्गलमा फलेको टिम्मुर टिप्ने र बजारसम्म लैजाने प्राविधिक ज्ञान नभएर ज्यामरुक कोटको गौश्वरा, तोराखेत लगायतका ग्रामीण बस्तीमा बोटको संरक्षण हुन नसकेको गौश्वराका युवा धु्रव घिमिरेले बताए ।
खेतबारीमा अन्न लगाउन छोडी टिम्मुर खेती गरेका तोरीपानीका कृषकहरु आम्दानीको प्रमुख स्रोत नै असिनाले नष्ट गरिदिएपछि सम्बन्धित निकायमा गुहार्न पुगेका छन् । धान र गहुँ फल्ने खेतका ग¥हामा समेत टिम्मुर खेती गरेका किसानहरुले क्षतिपूर्तिको माग गरेका हुन् ।
‘हामीले निकै दुःख गरेर सम्बन्धित निकायको सल्लाह अनुसार टिम्मुर खेती ग¥यौं, फल्न पनि राम्रै फलेको थियो,’ अध्यक्ष बानियाँले भने– ‘तर, प्राकृतिक प्रकोप आइप¥यो । हामी उचित क्षतिपूर्तिको पर्खाइमा छौं ।’